१४ जेष्ठ, २०७७ | Mero UK
Day: १४ जेष्ठ, २०७७
१४ जेष्ठ, २०७७ १४ जेष्ठ, २०७७ / अनलाइन खबर
१४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा नेता जनार्दन शर्माले चौरजहारी घटनाबारे आफूले राखेको भनाइलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको गुनासो गरेका छन् । रुकुम पश्चिमका जनप्रतिनिधिसमेत रहेका शर्माले संसदमा बोलेका विषयलाई बंग्याएर गलत रूपमा व्याख्या गरिएको बताए । ‘संसदमा मैले बोलेको स्पष्ट भनाइ हुँदाहुँदै तोडमोड गरी राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएको छ,’ शर्माले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै …
चौरजहारी घटनाबारेको भनाइ तोडमतोड गरेर राजनीतिकरण गरियो : जनार्दन Read More »
१४ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले संक्रामक रोग ऐन–२०२० मा टेकेर ४८ जना ब्यापारीलाई कारबाही गरेको छ । लकडाउनमा पनि अवैध तरिकाले ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर संक्रामक रोग कोरोनाको नियन्त्रणमा बाधा पुर्‍याएको र महामारकिो मौका छोपेर कालोबजारी गरेको ठहर गर्दै कञ्चनपुर प्रशासनले ४८ जना ब्यापारीलाई जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको हो । कञ्चनपुरका …
कञ्चनपुरमा ठगी र लापरबाही गर्ने ३५ ब्यापारीलाई कैद तोकियो Read More »
१४ जेठ, दैलेख। नारायण नगरपालिका दुईतर्फी समस्यामा परेको छ । एकातिर आफ्ना ११ वडाका नागरिकको व्यवस्थापनको चुनौती कायमै रहेको छ भने अर्कोतर्फ जिल्लाका नौमूले, भगवतीमाई, भैरवी, दुल्लुलगायत पालिकाका नागरिकसमेत दैलेख सदरमुकाम आएर जाने क्रम बढेपछि थाम्न नसक्ने समस्या भएको नारायण नगरपालिका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले बताए । उनले भने, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
१४ जेठ, कैलाली । कञ्चनपुरमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका एक जना वडा अध्यक्षको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष कल्लु रानाको मंगलबार राति मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । आफ्नै वडामा रहेको राष्ट्रिय माविमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका उनी एक्कासी बेहोस भएका थिए । ५८ वर्षीय रानालाई सेती …
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जुटेका वडाध्यक्षको मृत्यु, कोरोना परीक्षण हुने Read More »
१४ जेठ, काठमाडौं । मोरङको विराटनगरमा भारतको जोगबनी नाका हुँदै ३ सय ४ जना नेपालीहरु भित्रिएका छन् । उनीहरुलाई गएराति उद्धार गरिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । भारतबाट आएकाहरुलाई विराटनगर–१३ स्थित डीएभी स्कुलको होल्डिङ स्टेसनमा राखिएको छ । ३०४ जनामध्ये २३ जना सुनसरीका थिए । उनीहरुलाई दुहबी नगरपालिका वडा नं. » पुरा समाचार पढ्नुहोस
१४ जेठ, काठमाडौं। बायर्न म्युनिखले दोस्रो स्थानको बोरुसिया डर्टमण्डलाई पराजित गर्दै जर्मन बुण्डेसलिगामा ७ अंकको अग्रता बनाएको छ । मंगलबार भएको खेलमा बायर्नले डर्टमण्डलाई उसैको मैदानमा १-० ले पराजित गरेको हो । डेर क्लासिकर अर्थात जर्मन क्लासिको नामले परिचित यस खेलमा बायर्नलाई जित दलाउन ४३औं मिनेटमा जोसुअ किम्मिकले गोल गरे । बायर्नका रोवर्ट लेवान्डोस्की र …
डर्टमण्डलाई हराउँदै बायर्नले बनायो ७ अंकको अग्रता Read More »
१४ जेठ, काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव बुधबारको संसद बैठक पेश हुँदैछ । संसद बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे बस्दै छ । सो बैठकमा कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७’ पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको छ । यसलाई सर्वसम्मत पारित गराउने पहल सरकारले गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, » पुरा …
संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुँदै Read More »